FBC - Mootummaan naannoo Oromiyaa ispoortii naannichaa cimsuuf deggersa Birrii miiliyoona 25 taasise
Mootummaan naannoo Oromiyaa ispoortii naannichaa cimsuuf deggersa Birrii miiliyoona 25 taasise
Finfinnee, Hagayya 5,2009(FBC)-Mootummaan naannoo Oromiyaa ispoortii naannichaa cimsuuf deggersa Birrii miiliyoona 25 taasise.
Damicha cimsuufis hirmaannaan abbootii qabeenyaa fi hawaasa murteessaa ta'uun ibsameera.
Biiroon Dhimma Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa koree Waldaasaa of danda'uun gaggeessu kanneen akka Atileet Abirahaam Jeyilaanii fi Ganzabee Dibaabaatiin hogganamu hundeessuun hojjetamaa jira.
Gama kubbaa miilaatinis hirmaannaa naannoon pirimiyeerliigii biyyoolessaa keessatti qabdu dabaluuf, deggersi mootummaan taasisaa jiru kanneen yeroo darbanitiin addatti kan cimee hojjetamaa jiru ta'uu biirichi ibseera.
Kilaboota kubbaa miilaa Oromiyaa bakka bu'uun liigii biyyoolessaa fi liigii olaanaa biyyoolessaa keessa jiran akka pirimiyeer liigiitti guddatanii fi kilaboota pirimiyeer liigii Itoophiyaa keessa jiran Adaamaa fi Bul.Mag.Jimmaa immoo bara dorgommii 2010tti shaampiyoonaa akka ta'anii fi dorgomaa cimaa ta'anii akka itti fufan gochuuf karoora dhiyaaten mootummaan naannoo Oomiyaa maallaqa deggersa kilaboota kubbaa miilaaf ta'u Birrii miliyoona 25 ramaduun akka hojirra ooluuf eeyyameera.
Mallaqa ramadame kana keessaa :
1. kilabii Bulchiinsa Magaalaa Jimmaa bara kana ga'umsa olaanaatiin shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaa bara 2009 ta'uun pirimiyeerliigii galeef deggersa bittaa taphattootaafi hoji raawwachiiftuu adda addaaf kan oolu qarshii miliyoona 10,
2. Kilabiin kubbaa miilaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa dorgomaa gaarii fi pirimiyeer liigii Itoophiyaa bara 2009 sadarkaa 3ffaan xumuruu isaaf qarshiin mil.2 kan kennameef yoo ta'u maaallaqni hafe immoo kilaboota liigii olaanoo keesa jiraniif kan oolu ta'a jedhamuusaa koominikeeshinii biirichaarraa hubanneerraa.
Oduuwwan Biroo « Sadarkaa FIFAn ji’aan baasun Ityoophiyaan 16 fooyyessite	Shaampiyonaa: dorgommin gufachiisa meetira kuma 3 dubartootaa xumuraa har’a galgala geggeffama »